Ny tranonkala tia Mampiaraka — Mampiaraka toerana izay afaka mora amintsika ny hahita ny fitiavana. Ny vavahadin-tserasera noforonina manokana ho an’ireo izay te-hamorona fifandraisana mafy orina sy hihaona olona vaovao. Hifandray eto amin’ny maha tanora lehilahy sy ny vehivavy sy Matotra ny lehilahy sy ny vehivavy, dia te-ho an’ny tantaram-pitiavana niainany.
Fitiavana sy manome fitiavana amin’ny»Mampiaraka ao Japana ny»fitiavana.
Soa azo avy amin’ny toerana:
Fisoratana anarana maimaim-poana — tsy mila mandany vola mba handefa ny karama SMS na ny hamela ny finday maro.
Amin’ny Chat toerana tena maimaim-poana
Vao mameno ny mitaky saha ao amin’ny fisoratana anarana amin’ny endrika na miditra amin’ny alalan’ny iray amin’ireo tambajotra sosialy jereo ny mombamomba ny fiainana ny olona sy ny hanombohana ny resaka amin’ny olona rehetra;
Tsy misy bots — rehetra amin’ny olona eo amin’ny toerana ny tena. Isika ratra manohitra ny antontan’isa, milina, nandao ny fanontaniana ary ny hafa etsy ambony. Eo amin’ny vavahadim-hiresaka ihany ny tena olona avy amin’ny faritra samihafa eto amin’ny FIRENENA. Izany dia manome anao fahafahana bebe kokoa mba hijery ny mety ho tia tsy misy tsininy;
Tsara toerana ny rafitra — na dia ny olona lavitra ny teknolojia maoderina dia hahatakatra foana ny interface tsara ny vavahadin-tserasera ary afaka manomboka ny fifandraisana. Indrindra notsorina rafitra dia mamela anao avy hatrany hahatakatra ny fahafaha-miasa ny toerana mba hanome ny ambony indrindra ny saina mba hahita vady;
Ny mety hisian’ny fahazoan-dalana amin’ny alalan’ny tambajotra sosialy — raha nanontany tena momba ny fomba hisoratra anarana ho»Mampiaraka ao Japana ny»fitiavana na tsy izany, noho ny ny fitsapana mba handeha hamaky ny tantaran ny tambajotra sosialy.
Voalohany, dia hamonjy ny fotoana amin’ny check-in
Faharoa, izany dia hanampy anao mba hiteraka feno mombamomba azy mba hisarihana ny olona voasoratra anarana eo an-toerana;
Bilaogy toro-hevitra mahasoa — zava-dehibe ny tsy mavitrika ny fifandraisana vavahadin-tserasera sy ny fampahalalam-baovao fanohanana. Izany no mahatonga ny blaogy ho foana ny hahita ny lahatsoratra maro amin’ny toro-hevitra mahasoa ho an’ny mahomby Mampiaraka, mampahery sy voly publication. Izy ireo dia apetraka ao amin’ny iray hafa»Articles»fizarana;
Mahita ny tanàn-dehibe — fa ny mety ho tombony amin’ny ny fifandraisana eo amin’ny tranonkala misy ny lisitry ny fanontaniana. Fotsiny ianao mila mifidy ny toerana honenana avy amin’ny lisitra, ary ny pejy ho ny lisitry ny fanontaniana. Mariho fa amin’ny lisitra manaraka ny abidia sy ny hahita ny tanàna dia tena mora
← Chat ankizivavy
Online velona amin'ny chat →